R/wasaaraha magacaaban oo balan qaaday inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh – Radio Muqdisho
R/wasaaraha magacaaban Dr. Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke ayaa balan qaaday inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh oo dalka gaarsiisa horumar dhinac kasta leh.
R/wasaaraha cusub Cumar C/rashiid ayaa sheegay inuu sida ugu dhaqsiyaha badan usoo dhisi doono xukuumada tayo wanaagsan oo dalka ka samata bixisa dhibaatooyinka isbiirsaday ee ragaadiyay ummadda Soomaaliyeed.
Wuxuu intaa ku daray inuu wada tashi ku aadan dhismaha xukuumaddaasi uu kala tashan doono madaxweynaha, gudoomiyaha, baarlamanka, mudanayaasha iyo qeybaha bulshada.
R/wasaaraha cusub ayaa rajo ka muujiyay iney xukuumaddiisu la imaandoonto qorshayaal cad cad oo wax tar u leh dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
“Xukuumaddu waxey noqon doontaa mid ku saleysan waaqiciga siyaasadeed ee markaas jira marka waxaan rajeeynayaa inaan soo dhiso dowlad dalka iyo dadka u shaqeysa” ayuu yiri R/wasaaraha cusub Cumar C/rashiid.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu rajeeyay ineysan dhici doonin mad madow iyo ismaan dhaaf siyaasadeed oo keena dib u dhac, wuxuuna taa bedelkeeda sheegay in xukuumadiisu ay dalka u horseedi doonto horumar iyo baraare.